Professor Galaydh oo ay Dhaxda u Galeen Ciidamada Maamulka Somaliland – Rasaasa News
Jan 4, 2012 Professor Galaydh oo ay Dhaxda u Galeen Ciidamada Somaliland
Buuhoodle, January 04, 2012 [ras] – Ciidamada maamulka Somaliland oo doonayey in ay dilaan Professor Galayd, ayey fooda is dareen ciidan Ethiopia oo galbinayey wafti Ethiopian ah oo goob joog ka noqonaya shirka Khaatumo labo, oo ka dhacay magaalada taariikhiga ah ee Taleex.
Sida ay wararku sheegayaan ciidamada maamulka Somaliland, ayaa si ku talo galah dhexda ugu galay Professor Galaydh iyo waftiga la socday, iyaga oo doonayey in ay dilaan Professorka. Waftiga uu la socday Prosessor Galaydh, ayaa sida la sheegay ka gudbay goobta ka hore inta ayna ciidamada maamulka Somaliland soo gaadhin, waxayna fooda is dareen ciidaman la socday wafti Ethiopian ah oo goob joog ka noqonaya shirka khaatumo labo.
Labada ciidan ayaa rasaas isweydaarsaday waxaana goobta ku dhaawacmay 3 ruux oo ka tirsan ciidamanka labada dhinac ee xadabada iswaydaarsaday. Ciidanka Ethiopia, ayaa u awood sheegtay ciidanka dhexda u galay ee maamulka Somaliland, waxayna ka qabteen shan  ruux oo ciidanka Somaliland ah, kuwaas oo loo dhaadhiciyey dhinaca xarunta dawlada degaanka Somalida Ethiopia ee Jijiga.
Waftiga ka tagay dhinaca Ethiopia ee ka qayb galaya shirka khaatumo labo, ayaa goob joog ahaan u tagay halkaas iyo waliba ilaalinta amaanka, maadaama ayna Somaliya ka jirin dawlad hanan karta amaanka dalka iyo dadka.
Maamulka Somaliland oo jiritaankiisu ku xidhan yahay dalka Ethiopia, ayna kuna sugan yihiin la taliyeyaal, hayado waxbarasho iyo ganacsato Ethiopian ah, ayaa baryaha wuxuu wadaa arimo ka dhan ah dalka Ethiopia.